Ukudlala emphemeni of amakhadi, kungaba isihloko izifundo eziningi, ngokwesibonelo: imidlalo ikhadi, zazo zikhona njengamanje kakhulu, card tricks, sibonga emphemeni of amakhadi bili kuyabamangaza izilaleli ukuqagela, nabo iqhaza amakhadi kanye nezinye manipulations eziningi kungaba kwenziwe nge emphemeni ikhadi. Amamephu ukusinika izaba ukuchitha isikhathi ndawonye ukudlala, noma mhlawumbe njengoba isibukeli, bekhulisa abantu ndawonye abanazo.
Uvela babedlala amakhadi, nini futhi ngaphansi kwaziphi zwe? Impendulo ngqo kulo mbuzo ayitholakali. Kukhona kucatshangwa ukuthi sidlala amakhadi uqala ukuvela eGibhithe lasendulo, kusolakala ucindezelwa isitha, futhi benomuzwa wokuthi ukuphela kuseduze, abantu baseGibhithe wawathumba wonke ulwazi lwabo emphemeni of amakhadi, kodwa nje legend. Kukhona iziphakamiso ukuthi sidlala amakhadi kuqala kuvela eChina yasendulo, futhi ikhala kweqiniso, ngoba sonke siyazi ukuthi e-China lasendulo yasungulwa izinto eziningi. Kunemibono ukuthi amakhadi aqalwa yasungulwa e-Europe. Kodwa mina ukukukhumbuza waphinda, akukho ukwaziswa okunokwethenjelwa mayelana lapho amakhadi aqalwa yasungulwa.
ERussia, amakhadi ukudlala yaqala ukuvela ekuqaleni kwekhulu le-17, futhi ngokushesha waqala ukujabulela ithandwa enkulu. Ethandwa kakhulu ikhadi imidlalo benaso amasosha futhi ngenxa yalesi sizathu, imidlalo ikhadi yayivinjelwe. Phakathi nokubusa uPetru ukuvinjelwa kuqala ku amakhadi ukudlala wawuhoxisiwe, futhi ibalazwe ithole lokuzalwa yayo yesibili.
Sithanda ukusho tricks ikhadi. Kukhona inani elikhulu card tricks bonke bayakwazi kusimangaze umbukeli. Lokhu art lidinga amakhono kanye sleight esandleni, kodwa lapho emphemeni ikhadi usezandleni uchwepheshe, kubonakala sengathi akusiwona sleight esandleni futhi magic. Card tricks bayakwazi zidonse ukunaka kwanoma hhayi kuphela izingane kodwa futhi abadala, ngubani ukuqonda ukuthi akukho simangaliso kungenzeki, kodwa uma bebona amaqhinga anjalo, amehlo abo baqala agcwale injabulo. Lokhu kubuye inani sidlala amakhadi.
Ekuphetheni Ngithanda ukusho ukuthi kule nkathi ye-Inthanethi kanye nobuchwepheshe abavamile emphemeni of amakhadi, okuyinto yasungulwa kudala, ikwazi ukuphazamisa abantu ezintweni esizenza nsuku zonke futhi bebaqaphelisa kuye.
ATV ngezandla zakhe kusukela isithuthuthu.
The best isipho umama ngezandla zakhe
Eau de toilette "Egoist": Uhlolojikelele, incazelo ukunambitheka nezilinganiso